Geedo cagaaran | October 2019
Sida loo abuuro oo u koro daffodil dacha
Editor Ee Doorashada October 18,2019
Ugu Weyn Ee Geedo cagaaran
Xannaanooyinka geedaha miraha ah ee xaafadaha
Xannaanooyinka beeraha waa xarun dhab ah oo loogu talagalay horumarinta dhirta iyo duurka. Aaggan "cagaaran" dhammaan shuruudaha beeritaanka, horumarka iyo dhalmada dhammaan noocyada dalagyada dhirta ayaa la abuuray. Khabiirada xanaaneeye waxay yaqaanaan sida si haboon loogu daryeelo "bukaanka", sidaa daraadeed dhirta maxalliga ahi marwalba waa la hubaa si ay u muujiyaan heer sare oo ka mid ah badbaadada iyo dhalashada.
Laga soo bilaabo qolka "Bonsai" ilaa geedka tropical: Ficus "Bengal"
Neefta habboon ee digaagga ee dalka
Noocyada iyo teknoolajiyada shinni badan
Kala duwanaanshaha caanka ah: Sharaxaada baradhada Nevsky, qeexida, sawirrada
Bacrimiyee noocee ah oo ku habboon qaboojinta gudaha iyo sida loo dalbado dharka sare?
Ku dheji adigoo marsiiya
Xaaladaha dabiiciga ah
Caleenta guryuhu waa dulin yaryar oo inta badan ku hoyda guryaha iyo guryaha. Maaha arrin haddii ay tani tahay guri cusub ama duug ah, oo leh ama aan laheyn dayactir. Badanaa cayayaankaasi waxay u muuqdaan kuwo nadiif ah, dad nadiif ah, marka loo eego kuwa dambe waa la yaabay. Dhab ahaantii, waxay udub dhexaad u yihiin dhammaan arrimahaas. Read More
Noocyada diyaarinta dhufaysyada jiilaalka, aqoonta lagama maarmaanka ah ee beerta kasta
Sida loola dhaqmo caleemaha jilicsan ee cirridka
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Geedo cagaaran 2019